स्वास्थ्य Archives - Nepalpath.com : A complete news site
के तपाईं हातको नङ टोक्नु हुन्छ ? यस कारण टोक्नु हुँदैन
बिबिसी– सामान्यतया सबै खाले रोगव्याधबाट जोगिन चिकित्सकदेखि घरपरिवारका ठूलाबडाले हात सफा राख्ने सल्लाह दिन्छन्। सबै भन्छन्, ‘हात सफा राख। दिसा–पिसाब गरेपछि साबुनले हात धोऊ, खाना खानुअघि हात धोऊ।’ भनिन्छ हात सफा भए कीटाणू फैलिँदैनन्। खानेकुरा…
स्तनपानः आमा र शिशु दुवैलाई फाइदा
शिशुलाई जन्मेको दुई वर्षसम्म आमाको दूध ख्वाउन सल्लाह दिने डा. लक्ष्मी लामिछाने (नाम परिवर्तन)ले आफ्नो शिशुलाई भने जन्मेको दुई महिनासम्म मात्र स्तनपान गराइन् । पढाइ सकेर भर्खर मात्र काम थालेकी लामिछानेले आफू चिकित्सक भएका कारण…
विकराल बन्दै विषादी : स्वास्थ्यमा जोखिम
काठमाडौं- तरकारी र फलफूलको गुणस्तर परीक्षण नगरी खाँदा नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चिन्ता चिकित्सकहरुले गरेका छन् । विषादीयुक्त सागसब्जी र फलफूल निर्वाध रुपमा आयात गर्न दिने निर्णय जनस्वास्थ्यका दृष्टिले अपराधजन्य भएको उनीहरुको दाबी रहेको छ…
पाँच कारणबाट अन्धोपना हुन्छः बच्ने उपायहरु जान्नुहाेस
नारायण अधिकारी चितवन । मानव शरीरको संवेदनशील अङ्गका रुपमा रहेको आँखाको सुरक्षा गर्न सके दृष्टिविहीन हुनबाट बच्न सकिने नेत्र विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । आँखा रोग विशेषज्ञका अनुसार पाँच कारणबाट अन्धोपना हुने गर्दछ । भरतपुर आँखा…
क्यानसरवाट बच्न जान्नै पर्ने उपायहरू……….
नारायण अधिकारी -चितवन । समयमा उपचार गर्न सके धेरैजसो क्यान्सर रोग निको हुन्छ । विकसित मुलुकमा क्यान्सर हुनुपूर्व नै सावधानी अपनाउने र भइसकेमा तत्काल उपचार गर्ने भएकाले निको हुने दर बढी छ । नेपालमा रोगले…
के तपार्इ रक्सी सेवन गर्नुहुन्छ ? जान्नुहाेस भयानक खतराहरू !
काठमाडाैं । नेपाली समाजमा धेरै कुराको कुलत छ । जस्तै रक्सी, चुरोट, गाँजा तथा अन्य लागुऔषध । यो कुलत हो र यसलाई उपचारबाट ठीक गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान कमै व्यक्तिलाई छ । रक्सीलाई विभिन्न नामले…
ठकुरी सहयोग संजालको निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न (तस्विरहरु सहित )
सामाजिक सेवामा सकृय एक मात्र ठकुरी संस्था ठकुरी सहयोग संजालले हिजो भक्तपुरको झौखेलमा निशुल्क आँखा जाच तथा रक्तचाप र मधुमेहको परिक्षण शिविर संचालन गरेको छ । शिविरमा करिब ५ सयले सेवा लिएको ठकुरी सहयोग संजालले…
शरीर चिलाउँने, योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ? कारण र बच्ने उपाय जान्नुहाेस!
काठमाडौँ, २९ भदौ । के तपाईँलाई शरीर चिलाउँछ, योनी पोल्ने र पिसाब फेर्दा दुख्ने समस्या छ । यदि छ भने तपाईंलाई पिसाब सङ्क्रमण भएको हुन सक्छ । यस्तो समस्या भएमा हेलचक्ताइँ नगरी चिकित्सक कहाँ…
शिशु जन्मिएको कतिपछि यौनसम्पर्क राख्दा उत्तम हुन्छ, जान्नुहोस्
डा. राजेन्द्र भद्रा, काठमाडौ । धेरै दम्पतीको मनमा प्रश्न उठ्छ, शिशु जन्मिएपछि कहिलेदेखि यौन सम्पर्क पुनः सुरु गर्न हुन्छ रु सबैका लागि यति नै समय भनेर तोक्नु मनासिब नहोला । सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा दुवैले उपयुक्त मानेपछि । कतिपयले…
सिकलसेलका विरामीलार्इ पोषणयुक्त खानपानको सुझाव,उपचार क्रममा बाकेमा १२ काे ज्यान गयाे
भदौ, ३ नेपालगञ्ज । “छ वर्ष भयो श्रीमानको उपचार गराउन थालेको । रु सात लाख खर्च भइसक्यो । तर, रोग निको नै हुँदैन” बाँके बैजनाथ गाउँपालिका–३ की शर्मिला थारूले आफनाे व्यथा यसरी सुनाउनुभयो । शर्मिलाका…